ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တွင်နာတာရှည် Opiate ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော FosB / osFosB ဖော်ပြမှု၏ဂလူးကော့ကိုတီကိုရိတ်စည်းမျဉ်းဥပဒေ - ၂၀၁၂ ခုနှစ် - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(11): e50264 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0050264 ။ EPub 2012 နိုဝင်ဘာ 21 ။
Garcia-Perez: D, Laorden ML, မီလန်သင်္ဘော MV, Núñezကို C.
ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒဌာန, ဆေးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်း, Murcia, စပိန်၏ Group မှ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုအလှနျစိတ်ဖိစီးမှု-တုံ့ပြန်မှုစနစ်ကပွောငျးလဲ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုအထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဧရိယာများထဲမှာ, ကူးယူအချက်ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းစေပါတယ်။ ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအပေါ်ΔFosB၏ persistent သက်ရောက်မှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်ပလတ်စတစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားများ (ဥပမာ glucocorticoids GC) ထိုစိတ်ဖိစီးမှု-related ဟော်မုန်းအကြံပြုဗီဇစကားရပ်နှင့်ကူးယူအချက်များအတွက်အပြောင်းအလဲတချို့ပါဝင်ဖွယ်ရှိသောဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်အတွက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သွေးဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီလေ့လာမှုကမော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံး hypothalamic နှင့် extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် FosB / ΔFosB၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် GC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအဘို့, FosB / ΔFosB၏စကားရပ်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုဆယ်ရက်အကြာမှာ opiate မှီခိုလုပ်ခဲ့ထိန်းချုပ်မှု (အတုအယောင်-operated) နှင့် adrenalectomized (ADX) ကြွက်များတွင်တိုင်းတာခဲ့သည်။ နျူကလိယ accumbens (shell ကို) (NAc), အ stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, ဗဟို amygdala (CeA), hypothalamic paraventricular: အတုအယောင်-operated ကြွက်များတွင် FosB / ΔFosBစုံစမ်းစစ်ဆေးအားလုံးဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဒေသများရှိနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်သွေးဆောင်ခဲ့သည် နျူကလိယ (PVN) နှင့်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု noradrenergic ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု (NTS-တစ်ဦးက (2)) ၏နျူကလိယ။ Adrenalectomy attenuated FosB / ΔFosB၏တိုးလာထုတ်လုပ်မှု NAc, CeA နှင့် NTS အတွက်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ပြီးနောက်လေ့လာသည်။ ထို့အပွငျ ADX အဆိုပါ BNST, PVN နှင့် CeA ၏ CRH-အပြုသဘောအာရုံခံအတွင်း FosB / ΔFosB၏စကားရပ်လျော့နည်းသွားသည်။ အလားတူရလာဒ်များ NTS-တစ်ဦးက (2) TH-အပြုသဘောအာရုံခံခြင်းနှင့် NAc လိုလားသူ dynorphin-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် opiates မှ (FosB / ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းအဖြစ်ခန့်မှန်းခြေ) neuroadaptation ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများနှင့်စွဲအကြား link တစ်ခု၏သက်သေအထောက်အထားများ supporting, GC အားဖြင့် modulated ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ် Opiate မူးယစ်ဆေးဝါး, စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကုသမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်းထိရောက်သော analgesic အေးဂျင့်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအဖြစ်အလေးအနက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများမှီခို opiate နှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားရန်ကူညီသည်။ ထို့ပြင် opiates (ဘိန်းဖြူ, မော်ဖင်းအကိုက်) ၏ Non-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားစွဲကုထုံးများအတွက်အလားအလာကုထုံးမဟာဗျူဟာကိုညွှန်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်သောအပြောင်းအလဲအတွက် (ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု, မော်လီကျူး, ဆယ်လူလာနဲ့တိုက်နယ်အဆင့်သက်ရောက်မှုအပါအဝင်) မျိုးဗီဇစည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးယန္တရားများ implicates -.
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုလယ်ပြင်၌တစ်ဦးကဗဟိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူတို့အားမူးယစ်ဆေးဝါးရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှစူးရှကနေအကူးအပြောင်းဖျန်ဖြေကြောင့်ပရိုတိန်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ စွဲလမ်း၏လေ့လာမှုမှာအထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာမိသားစုက c-Fos, Fra-1 နှင့် Fra-2, FosB နှင့်ΔFosB full-အရှည် FosB တစ်ခြင်းကို splice မူကွဲပါဝင်သည် ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက်, ပင်လ, ပု Fos မိသားစုအခြားအဖွဲ့ဝင်များမှမတူဘဲ, ΔFosBကြိုးနှံစှာစူးရှသောမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပတ်ဆက်ရှိနေသေးသည်၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောရှည်လျားဝက်အသက်တာ၏။ အကြောင်းမူကား, ရလဒ်အနေဖြင့်, ΔFosBအဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစုပြုံ , , ΔFosBအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာနေသည်ရှည်လျားပြီးနောက်ဗီဇစကားရပ်ပုံစံအတွက်တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကယန္တရားကိုယ်စားပြုနိုင်ကြောင်းအကြံပြု .
ဒါဟာစိတ်ကြွဆေး, cannabinoids သို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens (NAc), prefrontal cortex နဲ့ dorsal striatum အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ΔFosBတစ်ခုတိုးစေပါတယ်, ကိုကင်းမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီအတိုးစွဲ၏ဝိသေသအပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်၏မူးယစ်ဆေးတိုးမြှင် sensitivity ကိုမှဦးဆောင်မယ့် neuroadaptation ဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီ -။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကြောင်းကြိမ်မြောက်ပြသကြနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် FosB / ΔFosBအဆင့်ဆင့်၏အီးတိုးမြှင့်အကျိုးကိုစနစ်ကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်လည်း (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီးဖြစ်သော) ကဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုမသာ, အဖြစ်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု-တစ်ဦး၏နျူကလိယထဲမှာ2 noradrenergic ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု (NTS-တစ်ဦးက2အဓိက noradrenergic သည့်စနစ်) ကိုစိတ်ဖိစီးမှု neurocircuitry innervating ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူဗျည်းများတွင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတော်ကြာပုံစံများကိုလည်း NAc နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသွေးဆောင် , .
များစွာသောအချက်တွေကဒီအာရုံကြောရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွဲရှုပ်ထွေးပြီးဖရိုဖရဲဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအချက်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိကျသောရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည် -။ အဆိုပါ hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA, မူလတန်း endocrine စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း) ဝင်ရိုးနှင့်တိုးချဲ့ amygdala တို့ပါဝင်သည်သော extrahypothalamic စိတ်ဖိစီးမှုစနစ် (နှင့် NTS-တစ်ဦးကနှစ်ဦးစလုံး2) မှီခိုအလားအလာနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် dysregulated နေကြတယ် , . ထို့အပြင်ခုနှစ်, HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုအပြီးဆင်တူသည် , , မြင့်မားသော corticotropin-releasing ဟော်မုန်း (CRH), adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH), နှင့် glucocorticoids (GC) လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ. Tမိမိအတုံ့ပြန်မှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုနိုင်ပြီး acute လိုက်လျောညီထွေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောစွဲများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအဖြစ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ, စဉ်အတွင်းအပြုအမူရောဂါဗေဒဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ ။ လေ့လာရေးသေး GC နှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခို-သွေးဆောင် FosB / ΔFosBသော induction အကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာကြပြီမဟုတ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဒေသများရှိမော်ဖင်းအကိုက်စဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် FosB / ΔFosBစကားရပ်အပေါ် GC ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏အဓိကအရေးပါအတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity (IR) ရက်နေ့တွင်နှစ်နိုင်ငံ adrenalectomy (ADX) ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်၏လှုပ်ရှားမှု neurotransmitters / neuromodulators ၏နံပါတ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ CRH စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိအဓိက neuropeptide နှင့်ပြန်သွားကြသည်မှစွဲလမ်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အားနည်းချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦး Pre-တည်ဆဲအားနည်းချက်အတွက်၎င်း၏အလှူငွေ postulated ထားပြီး ။ ငါဎများအပြင်, ပေါများလုပျငနျး NTS-တစ်ဦး၏အရေးပါမှုကိုထောကျပံ့2 မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဤ neurocircuitry ပြောင်းလဲပစ်မယ့် neurotransmitter အဖြစ် noradrenaline NA () ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု system ကို innervating ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သိသိသာသာအထောက်အထား dynorphin စကားရပ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း striatum နှင့် amygdala အတွက် activated ကြောင်းအကြံပြု ။ ဤအဖြစ်ရပ်မှန်ပေးထား, ဒီလေ့လာမှုကိုအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏တိကျသောလူဦးရေအတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်အပေါ် GC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုသည်အထိအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် Gain နှင့် Plasma ACTH နှင့် Corticosterone အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် Adrenalectomy ၏ဆိုးကျိုးများ
အဆိုပါ immunodetection assay ဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ, ကျွန်တော်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှု၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, တိရိစ္ဆာန်များ၏အလေးချိန်လုံးလေးများ implantation ၏နေ့၌နှင့် (နေ့က 10) ဦးသေဆုံးပြီး၏နေ့၌မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ANOVA adrenalectomy အဘို့ကိုယျခန်ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု [F (1,47) ထင်ရှား two-လမ်း = 13.24, p = 0.0007), မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု [F (1,47) = 281.05, p<0.0001] နှင့် ADX နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန် [F (1,47) = 4.13, p = 0.0479] ။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီ , , post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဖင်းအကိုက်အပေါ်မှီခိုပြန်ဆိုနှစ်ဦးစလုံးအတုအယောင်များနှင့် ADX အုပ်စုများတစ်ဦးသိသိသာသာ (p ပြညွှန်ပြ<0.001) နိမ့်ကိုယ်အလေးချိန် (-13.75 ± 5.0 ဂရမ်ဎ = 12; 3.84 ဂရမ်ဎ± 2.45 = ရလဒ်များအရအိပ်ယာလုံးလေးများလက်ခံရရှိအတုအယောင်များနှင့် ADX တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာထက်အသီးသီး 13,) (44.58 ± 1.7 ဂရမ်ဎ = 12; 49.57 ဂရမ်ဎ± 2.4 = ဒီတိရစ္ဆာန်လေ့လာတွေလျှော့အစားအစာစားသုံးမှုမှစွပ်စွဲထားပြီးဖြစ်သောအသီးသီး 12,), .
အဆိုပါ adrenalectomy များ၏ထိရောက်မှုစစ်ဆေးစေရန်, ဟော်မုန်းပါဝင်မှုပလာစမာထဲမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ F ကို (1,18): ANOVA ACTH နှင့် corticosterone ပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် adrenalectomy နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် two-လမ်း adrenalectomy ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု [ACTH ပြသ = 68.12, p<0.0001; corticosterone: F (1,45) = 10.42, p = 0.0023) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Newman ကန့် post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (ပြသသင်္ဘောသဖန်း။ S1) ရလဒ်များအရအိပ်ယာအတွက် (ဎကြောင်း = 6) - နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် (ဎ = 4) ACTH ၏ -ADX ကြွက်များပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှု p (ပိုမိုမြင့်မားခဲ့<အကဲဖြတ်နှစ်ခုကုသမှု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, ဎများအတွက်အတုအယောင်-operated တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 0.001) = 6; နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်, ဎ = 6) ။ အဘယ်သူမျှမပြုပြင်မွမ်းမံ ADX-ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားသွေးရည်ကြည် corticosterone အာရုံစူးစိုက်မှု (ဎအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် = 14) နှင့် ADX-မော်ဖင်းအကိုက် (ဎ = 13) ကြွက်ကုသ။ ADX-မော်ဖင်းအကိုက်ကုသကြွက်များတွင် corticosterone ၏အာရုံစူးစိုက်မှု (သိသိသာသာ p ခဲ့ကြသည်<0.01) n (အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်တွင်တွေ့မြင်များထက်နိမ့် = 10) ကြွက်ကုသ။ အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအပြောင်းအလဲများအတုအယောင်-ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (ဎနှင့်နှိုင်းယှဉ်အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်စုတစ်စုတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ = 12) ။
Adrenalectomy differential ဟာဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု System ကို Sub နေရာများအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်မူတည်-သွေးဆောင် FosB / ΔFosB Attenuates
ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ထဲထညျ့ကြွက်များ) ခုနှစ်, FosB / ΔFosB-မှာ IR ၏အားနည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစကားရပ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဦးနှောက်စနစ်၏အပေါငျးတို့သဒေသများရှိဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအားလုံးဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် FosB / ΔFosB၏အသွင်အပြင်အတွက်ရလဒ်။ အဆိုပါ NAc (shell ကို) ခုနှစ်, Two-လမ်း ANOVA adrenalectomy ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု [F (1,16) ပြသ = 6.44, p = 0.0220] နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသ [F (1,16) = 19.98, p = 0.0004] ။ Newman က-Keuls '' post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (ပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 2A-E) မော်ဖင်းအကိုက် - ကုသကြွက်များတွင် FosB / osFosB စကားရပ်အတွက်သိသာထင်ရှားသော (p <0.01) တိုးရှိခဲ့သည်။ မော်ဖင်းအကိုက် - ADX ကြွက်များတွင် NAc တွင် FosB / osFosB ပရိုတိန်းဖော်ပြမှုကို (p <0.05) သိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ BNST အတွက် Two-way ANOVA သည်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည် [F (1,16) = 48.92, p<0.0001] ။ Post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ခုတိုး (p ထင်ရှား<FosB / ΔFosB၏စည်းမျဉ်းမသက်ဆိုင်ဘဲမူလ GC အာရုံစူးစိုက်မှု၏နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုညွှန်း sham- နှင့် ADX-မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက် FosB / ΔFosBအတွက် 0.001), (သင်္ဘောသဖန်း။ 2F-J ကို) ။ အဆိုပါ CeA အတွက် FosB / ΔFosBများအတွက် ANOVA adrenalectomy ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု [F (1,15) ပြသ two-လမ်း = 20.51, p = 0.0004] နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် pretreatment [F (1,15) = 27.52, p<0.0001] ။ post ကို hoc စမ်းသပ်မှု ADX မော်ဖင်းအကိုက် - မှီခိုအုပ်စုတွင် (p <0.01) ကို attenuated ခဲ့သောအတုအယောင် - ရလဒ်များအရအိပ်ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အတုအယောင် -morphine ကြွက်များတွင် FosB / osFosB အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာတိုး (p <0.01) ပြသခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2K အို) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ADX ရလဒ်များအရအိပ်ယာ - pelleted ကြွက်အတုအယောင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုသည်ထက် FosB / osFosB ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့် (p <0.01) ပြသခဲ့သည်။
Adrenalectomy differential ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။
အဆိုပါ PVN အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်အပေါ် adrenalectomy နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ် two-လမ်း ANOVA (parvocellular subdivision) မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု [F (1,16) ထင်ရှား = 16.31, p<0.0001] ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကသိသိသာသာပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 3A-E) တိုး (p<sham- နှင့် ADX-မော်ဖင်းအကိုက်ကုသကြွက်နှစ်ဦးစလုံးထံမှ PVN အတွက် FosB / ΔFosB-မှာ IR အတွက် 0.05) ။ အဆိုပါ NTS-တစ်ဦးအတွက်2 catecholaminergic ဆဲလ်အုပ်စု ANOVA မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုတစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား Two-လမ်း [F (1,11) = 76.33, p<0.0001] ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကသိသိသာသာပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 3F-J ကိုအတုအယောင်-ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်များတွင် FosB / ΔFosB-မှာ IR အတွက်) တိုး (p<အဆိုပါ ADX မော်ဖင်းအကိုက် - မှီခိုအုပ်စုတွင် (p <0.001) attenuated ခဲ့သော 0.05) ။
အဆိုပါ PVN အတွက် FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့် NTS-တစ်ဦးအပေါ် adrenalectomy ၏ဆိုးကျိုးများ2 မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်မှ။
နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် Exposure PVN, BNST နှင့် CeA အတွက် CRH အာရုံခံသို့ FosB / ΔFosBဖော်ပြမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ Glucocorticoids ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
Two-လမ်း ANOVA အဆိုပါ BNST အတွက် FosB / ΔFosB-အပြုသဘော / CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ adrenalectomy ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက် [F (1,20) ပြသဘို့ = 64.43, p<0.0001] နှင့် adrenalectomy နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် [F (1,20) = 6.80, p = 0.0169] ။ အဆိုပါ PVN ခုနှစ်, Two-လမ်း ANOVA adrenalectomy ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု [F (1,19) ထင်ရှား = 11.35, p = 0.0032] ။ Two-လမ်း ANOVA အဆိုပါ CeA အတွက် FosB / ΔFosB-အပြုသဘော / CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ adrenalectomy ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု [F (1,20) ပြသဘို့ = 106.85, p<0.0001] မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု [F (1,20) = 7.33, p = 0.0136] နှင့် adrenalectomy နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး pretreatment အကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် [F (1,20) = 7.07, p = 0.0151] ။ ကိန်းဂဏန်းများ 4, , 5,5, ,66 အတုအယောင်သို့မဟုတ် ADX-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များကနေ BNST, PVN နှင့် CeA အပိုင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေကိုပြသ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ FosB / တစ်သိသိသာသာအရေအတွက်ကိုΔFosB-အပြုသဘောအာရုံခံပူးတွဲအဆိုပါ BNST (p အတွက် CRH ဖော်ပြတွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရှား<0.01; သင်္ဘောသဖန်း။ 4E), PVN (p<0.05; သင်္ဘောသဖန်း။ 6E) နှင့် CeA (p<0.01; သင်္ဘောသဖန်း။ 6E) အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်များတွင်အတုအယောင်-ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အတုအယောင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းထို့အပြင် FosB / ΔFosB-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ်ပူးတွဲ ADX ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-pellet ကြွက်များနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင် CRH ဖော်ပြ, သုံးယောက်အရေးပါအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ ကိန်းဂဏန်းများ 4, , 5,5, ,66 (BNST: p<အတုအယောင်ပေါင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs. 0.01; p<အတုအယောင်ပေါင်းမော်ဖင်းအကိုက် vs. 0.001; PVN: p<အတုအယောင်ပေါင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs. 0.05; p<အတုအယောင်ပေါင်းမော်ဖင်းအကိုက် vs. 0.001; CeA: p<အတုအယောင်ပေါင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs. နှင့်အတုအယောင်ပေါင်းမော်ဖင်းအကိုက် vs. 0.001) ။
Adrenalectomy အဆိုပါ BNST CRH-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက် FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ် attenuated ။
Adrenalectomy အဆိုပါ PVN CRH-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက် FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ် attenuated ။
Adrenalectomy အဆိုပါ CeA CRH-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက် FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ် antagonized ။
အဆိုပါ BNST အဆင့်မှာ, CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ်နှစ်-လမ်း ANOVA ADX [F (1,20) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုပြသ = 103.92, p <0.0001] နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် [F (1,20) = 4.35, p <0.05] ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 1, Newman က-Keuls post ကို hoc စမ်းသပ်မှု ADX ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်မော်ဖင်းအကိုက် -pelleted ကြွက်အတုအယောင် - ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက် - မှီခိုအုပ်စုများထက်နိမ့် CRH အာရုံခံ (p <0.001) ပြသခဲ့သည်။ PVN တွင်နှစ်ဖက်လှည့် ANOVA သည်သိသိသာသာ adrenalectomy ကိုပြသည် [F (1,19) = 11.35, p = 0.0032] ။ အဆိုပါ CeA အဆင့်မှာစုစုပေါင်း CRH အာရုံခံနှစ်ခု-လမ်း ANOVA [F (1,20) ADX ၏သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများထင်ရှား = 240.09, p <0.0001] နှင့် ADX နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အကြားအဓိကအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု [F (1,20) = 4.49, p = 0.0467] ။ စားပွဲတင် 1 ADX placebo- သို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်များကနေ CeA မှာ CRH အာရုံခံအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းရှိကွောငျးကိုသရုပ်ဖော်သည်။ စားပွဲတင် 1 နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုသည် BNST နှင့် CeA အဆင့်ရှိ CRH-positive neuron များမြင့်တက်ခြင်း (p <0.05) ကိုပြသခဲ့သည်။
စားပှဲ 1. placebo- သို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်-တောင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် BNST, PVN နှင့် CeA အတွက် CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ်ပေါ် adrenalectomy ၏သက်ရောက်မှုများ NAc နှင့် NTS အတွက် TH-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက်လိုလားတဲ့ DYN-အပြုသဘောအာရုံခံ။
FosB / ΔFosBအပေါ် Adrenalectomy ၏သက်ရောက်မှုများ NAc အတွက် DYN-အပြုသဘောအာရုံခံ (ရှဲလ်) သို့
ကျနော်တို့ (နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ပြီးနောက် NAc (shell ကို) တွင်ပူးတွဲဖော်ပြကြောင်းလိုလားသူ DYN-အပြုသဘောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမအရေးပါသောအပြောင်းအလဲများ FosB / ΔFosBလေ့လာတွေ့ရှိသဖန်းသီး။ 7) ကရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အဆိုပါ NAc အတွက် FosB / ΔFosB-အပြုသဘော / လိုလားသူ DYN-အပြုသဘောအာရုံခံ (shell ကို) အတွက် ANOVA ADX ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက် [F (1,19) ပြသ two-လမ်း = 10.11, p = 0.0049] ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သင်္ဘောသဖန်း။ 7C, FosB / ΔFosB-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ် ADX မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်ပူးတွဲဖော်ပြလိုလားသူ DYN (သိသိသာသာ p ခဲ့ကြောင်း<အတုအယောင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာကုသမှုနှင့် ပတ်သက်. 0.05) နိမ့်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 1, ADX အဆိုပါ NAc (shell ကို) မှစုစုပေါင်းလိုလားသူ DYN ဆဲလ်မအပြောင်းအလဲများကိုသွေးဆောင်။
FosB / ΔFosBပရိုတိန်းစကားရပ်အပေါ် adrenalectomy ၏သက်ရောက်မှုများ NAc (shell ကို) လိုလားသူ DYN-အပြုသဘောအာရုံခံနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုကြွက်များကနေ NTS TH-အပြုသဘောအာရုံခံ၌တည်၏။
Adrenalectomy အဆိုပါ NTS-တစ်ဦးအတွက် TH-အပြုသဘောဆောင်သောအာရုံခံသို့မော်ဖင်းအကိုက်မူတည်-သွေးဆောင် FosB / ΔFosBဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်2 Noradrenergic ဆဲလ် Group မှ
Two-လမ်း ANOVA အဆိုပါ NTS-တစ်ဦးအတွက် FosB / ΔFosB-အပြုသဘော / TH-အပြုသဘောအာရုံခံများအတွက်2 ADX [F (1,15) ၏အဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် = 64.86, p<0.0001] မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု [F (1,15) = 29.62, p<0.0001] နှင့် adrenalectomy နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် [F (1,15) = 19.24, p = 0.0005] ။ Newman က-Keuls post ကို hoc စမ်းသပ်မှု FosB / ΔFosB-အပြုသဘောအာရုံခံတစ်သိသိသာသာအရေအတွက် NTS အတွက်ပူးတွဲဖော်ပြ TH (p တွေ့ရှိခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွသ<0.001; သင်္ဘောသဖန်း။ 7F) အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်၌တည်၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, FosB / ΔFosB-အပြုသဘောအာရုံခံ ADX မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင် TH Co-ဖော်ပြ၏နံပါတ် p (သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့<မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအတုအယောင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ 0.001) သင်္ဘောသဖန်း။ 7F။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 1, ADX အဆိုပါ NTS အတွက်စုစုပေါင်း TH-အပြုသဘောအာရုံခံမအပြောင်းအလဲများကိုသွေးဆောင်။
လက်ရှိရလဒ်တွေကို, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ် Module နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး-သွေးဆောင် FosB / ΔFosBစကားရပ်အချက်ပြကြောင်းဦးနှောက် GC ညွှန်ပြ။
သက်သေအထောက်အထားများ၏ဆုံလိုင်းများစိတ်ဖိစီးမှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြ ။ persistent စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှု (စသည်တို့ကိုဥပမာ CRH, GC, NA) စိတ်ဖိစီးမှု-related လမ်းကြောင်းထဲမှာပေါင်းစပ်, စကားရပ်များနှင့်အချက်ပြပြောင်းလဲပစ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related မော်လီကျူးများပေါ်မှာပြသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဗီဇစကားရပ်၌အပြောင်းအလဲတချို့အတွက်ရလဒ်များသောကဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း, အကျိုးသက်ရောက်စေ ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများချက်ချင်းဗီဇစကားရပ်၏ activation မှုဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းအာရုံခံ activation ၏ထပ်ပုံစံများဖြစ်ပေါ်နိုင်စွမ်းမျှဝေပါ။
ဒါဟာကျယ်ကျယ်စွဲလမ်းတ္ထုများနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုသူတို့၏အပြုသဘောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဓိကအရေးပါအတွက်ကူးယူအချက်ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပြီး , , , နှင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအပေါ်ΔFosB၏ persistent သက်ရောက်မှုစွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအံ့သောငှါအဆိုပြုပြီးပါပြီ , ။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဒေသများရှိမော်ဖင်းအကိုက်-evoked ΔFosBစုဆောင်းခြင်း၏မော်လီကျူးယန္တရားများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်အတွက်ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖြစ်စေအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့လညျးပါဝငျရာ (အ PVN အတွက် CRH ကထိန်းချုပ်ထားသောဟော်မုန်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ် (HPA ဝင်ရိုး) တွင်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် FosB / ΔFosBစကားရပ်အပေါ်, အဖြစ် extrahypothalamic စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် GC များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala; ), CRH နှင့် (NA နှင့် dynorphin အပါအဝင်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုကို-related စနစ်များကကမကထပြုခဲ့; ).
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကခုနစ်ရက်ပတ်လုံးနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးချဲ့ amygdala, PVN နှင့် NTS-တစ်ဦးအတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြ2 ။ ဤအဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခု CeA, BNST နှင့် NAc အတွက် FosB / ΔFosBအတွက်တိုး (shell ကို) အဖြစ် PVN နှင့် NTS-တစ်ဦးက evoked ကြောင်းပြသ2။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ တကယ်တော့, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါး NAc (shell ကို) နှင့် CeA ဖို့ VTA ထံမှ dopaminergic ဂီယာကိုသက်ဝင်။ ဤသည်ကို Activation နှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်အကျိုးဆက်များကိုအပြုသဘောဆောင်သည့် VTA တည်ရှိသောထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအပေါ် GC လုပ်ရပ်များနှင့်အတူ related ခံရဖို့ပြသပြီ ။ ဒီအယူအဆ supporting, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ NAc (shell ကို) အတွက် FosB / ΔFosB-မှာ IR ကိုပြသနှင့် CeA မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းအေပီသတင်းဌာန-1 ကူးယူအချက်များနှင့်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအကြား cross-ဆွေးနွေးချက်ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ, ရာ ADX တိရိစ္ဆာန်များအတွက် attenuated ခဲ့သည် ။ NAc နှင့် CeA အတွက် FosB စကားရပ်အပေါ် ADX များ၏လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုမှမတူဘဲ, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တဲ့ GC-လွတ်လပ်သောထုံးစံအတွက် PVN နှင့် BNST အတွက် Fos / ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော CRH, NA နှင့် DYN အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏အတော်ကြာ neurotransmitters သည်, စွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏ဝိသေသတို့သည်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များနှင့်အတူ related ပြီ , -။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ခြင်းဟာ BNST, CeA နှင့် PVN အတွက် CRH ပါဝင်သောအာရုံခံအတွင်း Fos / ΔFosBစကားရပ်များတွင်သိသိသာသာတိုး evoked ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုသိသိ amp-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (CRE) က်ဘ်ဆိုက်များမှာလုပျဆောငျနိုငျ . စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားΔFosBတစ်ဦးမှတ်တမ်း repressor သို့မဟုတ် Active ဖြစ်စေအဖွစျဆောငျရှကျပေးနိုငျကွောငျးဖျောပွသ , ။ , GCRH ဗီဇက၎င်း၏ကမကထ sequence ကိုတစ်ဦး CRE motif ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကိုကင်းသက်ရောက်မှုများအတွက်အစီရင်ခံအဖြစ် CRH အာရုံခံအတွက် FosB / ΔFosBစုဆောင်းခြင်း, CRH အဆင့်ဆင့်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေနိုင်သောအဆိုပြုခံရအံ့သောငှါ iven အထူးသဖြင့် CeA နှင့် BNST အတွက်ရှိရာ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျနော်တို့မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ်တစ်တိုးမြှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီအယူအဆ supporting, CRH mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမော်ဖင်းအကိုက်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် CeA တှငျဖျောပွထားလျက်ရှိသည် ။ သို့သော် CRH-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုပြီးနောက် PVN အတွက်မပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ခြင်းဟာ PVN CRH hnRNA အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းတော်မမူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း ။ PVN CRH စကားရပ် GC ကျ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက နှင့်ပေးထားကြောင်းလက်ရှိအလုပ်နှင့်အခြားသူများ ,  နာတာရှည် opiate ထိတွေ့ corticosterone လွှတ်ပေးရန် modify မပြုခဲ့ကြောင်းပြသပါကနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး CRH ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမပြောင်းခဲ့ဘူးကြောင်းယုတ္တိပုံရသည်။
corticosterone ၏ Peripheral အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် CeA နှင့် BNST အတွက် CRH mRNA စကားရပ်ကိုတိုးပွားစေ , ။ ထို့အပြင် ADX အဆိုပါ CeA အတွက် CRH စကားရပ်လျော့နည်းသွား , ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း BNST နှင့် CeA အတွက် CRH အာရုံခံ၏နံပါတ်အတွက်တိုး adrenalectomy ပြီးနောက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်သတိပြုမိတယ်။ မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း CRH အာရုံခံအတွင်း Fos / ΔFosBတို့၏စီးပွါး ADX တိရိစ္ဆာန်များအတွက် attenuated ခဲ့ပေးထားသောကြောင့်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် GC အားဖြင့် CRH စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Fos / ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, က GC အဆိုးဟာ PVN အတွက် CRH ဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးထိနျးညှိကြောင်းလူသိများသည် ။ သဘောတူညီချက်မှာတော့လက်ရှိဒေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်း adrenalectomy ဒီနျူကလိယထဲမှာမော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း CRH ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက် Fos / ΔFosB-မှာ IR အတွက်တိုးဖျက်သိမ်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၌, immunochemical ဒေတာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုသိသိသာသာ NTS-တစ်ဦးအတွက် Fos / ΔFosBများအတွက်အစွန်းအထင်းတိုးပွားလာကြောင်းထင်ရှား2, ADX အောက်ပါလျော့နည်းသွားခဲ့သည့်။ ကျနော်တို့ FosB / ΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောတိကျတဲ့အာရုံကြောလူဦးရေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ TH အတွင်း Fos / ΔFosB-မှာ IR (catecholamines ပေါင်းစပ်အတွက်နှုန်း-ကန့်သတ်အင်ဇိုင်း) -positive အာရုံခံတဲ့ကြံ့ခိုင်တိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ NA စွဲနေတဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပြသထားသည် ။ ကြိုတင်အလုပ်များတွင်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ခြင်းဟာ NTS-တစ်ဦးအတွက် TH အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့် evoked2 , ။ ဒါဟာ TH ဗီဇက၎င်း၏ကမကထတစ်ခုက AP-1 site ကိုရှိတယ်လို့လူသိများသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို FosB / ΔFosBအဆိုပါ NTS-တစ်ဦးအတွက် TH အဆင့်ဆင့်၏ opiate-သွေးဆောင်တိုးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုစေခြင်းငှါ,2။ noradrenergic ဆဲလ်အုပ်စုကို GC receptors (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြ Brainstem ။ ထိုသို့ GC noradrenergic neurotransmission အတွက်အလိုလိုအခန်းကဏ္ဍများပြသထားပြီး , , ။ ထို့ကြောင့်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းရန်၏အုပ်ချုပ်မှု TH activation နှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင် NA လှုပ်ရှားမှုအများအပြားရှုထောင့်ထိခိုက် ။ လက်ရှိရလဒ်တွေကို ADX အောက်ပါ NTS-တစ်ဦးအတွက် FosB / ΔFosBဖော်ပြ TH-အပြုသဘောဆဲလ်တစ်ကျဆင်းခြင်းရှိ၏ကွောငျးဖျောပွခဲ့2။ adrenalectomy အဆိုပါ NTS-တစ်ဦးအတွက် TH ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးပိတ်ဆို့ကြောင်းအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွား2 မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း နှင့် GRE / AP-1 ဆိုဒ် TH ဗီဇကမကထတှငျဖျောပွထားပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ NTS-တစ်ဦးအတွက် noradrenergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ် GC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အာမခံအဖြစ်ΔFosBထောက်ပြမယ်2 opiate မှီခိုနေစဉ်အတွင်း။
DYN ΔFosBတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်ဗီဇအဖြစ် postulated ထားပြီး , ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာ NAc (shell ကိုအတွက်လိုလားတဲ့ DYN-ဖော်ပြအာရုံခံအတွင်း FosB / ΔFosBစကားရပ်ပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြောင်းကိုပြသ) ။ DYN ထုတ်ဖော်ΔFosBစည်းမျဉ်း, Zachary et al နှင့်စပ်လျဉ်း  ဤသို့ကူးယူအချက် DYN စကားရပ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း postulating, Over-ဖော်ပြကြွက်ΔFosBထံမှ NAc အတွက် DYN mRNA အဆင့်ဆင့်၏သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကနေ, ကနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များပရိုတိန်းအဆင့်မှာရရှိသောခဲ့ကြကြောင်းပေးထား, FosB / ΔFosBလှုပ်ရှားမှုမှတဆင့် DYN စကားရပ်ကိုအထူးပြုနိဂုံးချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါဟာ DYN / Kappa opioid စနစ်အားခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဒြပ်စင်ပါဝင်ကြောင်းလိုလားသူစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ပြည်နယ်များသွေးဆောင်ဟန်ကြောင်း postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု NAc, DA နှင့် extrahypothalamic CRH စနစ်ဖြင့်အပြန်အလှန် interaction ကပါဝငျပမေ ။ သို့သော်အနည်းငယ်သည် NAc အတွက် DYN စကားရပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော GC စည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း DYN စကားရပ်များ၏ဖိနှိပ်မှုကနေတဆင့် NAc အတွက်ΔFosB, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုဖို့ sensitivity ကိုတိုးပွါးကြောင်းအဆိုပြုထားခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ resilience မှဦးဆောင်ခဲ့ပြီး , ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ FosB / ΔFosB / လိုလားသူ DYN-အပြုသဘောအာရုံခံ၏နံပါတ် ADX ကြွက်များကနေ NAc အတွက်လျော့ကြောင်းပေးထားသည် mesocorticolimbic DA သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့မော်ဖင်းအကိုက်အပြုသဘောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် GC များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများ mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် ADX ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနေစဉ်အတွင်း underactivated သော VTA နှင့် NAc ဖို့ CeA နှင့် / သို့မဟုတ် BNST မှပေါ်ပေါက် CRH စီမံချက်များမှတဆင့်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီလေ့လာမှုသက်သေအထောက်အထားများကြောင်း GC ထောက်ပံ့စိတ်ဖိစီးမှု-related ဒေသများရှိမျိုးဗီဇစကားရပ်ပုံစံ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုရေရှည်တည်တံ့မှုစခွေငျးငှါအရာ, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် FosB / ΔFosBစုဆောင်းခြင်းအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း FosB / ΔFosB opiate မှီခိုနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု system ကို plasticity အပေါ် GC-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများနာတာရှည် opiates ရွေးချယ်ထားသည့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဒေသများတွင် FosB / ΔFosBသွေးဆောင်သော intracellular ယန္တရားများအဖြစ် GC ခြင်းဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် FosB / ΔFosBစကားရပ်များ၏ဖိနှိပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းယန္တရားဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ကြသည်။
Corticosterone နှင့်လက်စထရော Sigma ဓာတု Co (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ corticosterone ၏လုံးလေးများဒေါက်တာMárton Vajna, (ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး, ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်ဌာန, Semmelweis တက္ကသိုလ်, ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ) ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မော်ဖင်းအကိုက်အခြေစိုက်စခန်း (Alcaliber Laboratories, မက်ဒရစ်, စပိန်) သို့မဟုတ် Lactose ကို (ထိန်းချုပ်မှု) ၏လုံးလေးများဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးနည်းပညာများ၏ဦးစီးဌာန (ဆေးဝါး, Granada, စပိန်၏ကျောင်း) တွင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ Pentobarbital Hospira (Hoofddorp, အဆိုပါနယ်သာလန်) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ Ketamine chlorhydrate နှင့် xylazine Labs ကထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။ Merial (လိုင်ယွန်, ပြင်သစ်) နှင့် Labs က။ အသီးသီး Calier (ဘာစီလိုနာ, စပိန်), ။
အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (ထိုစမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 220-240 ပါ g; Harlan, ဘာစီလိုနာ, စပိန်) လှောင်အိမ်ထဲမှာအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် (အရှည်, 45 စင်တီမီတာ; width ကို, 24 စင်တီမီတာ; အမြင့်, 20 စင်တီမီတာ) တစ်ဦးခန်း၌ဆိုက်ရောက်အပေါ် ရေနှင့်အစားအစာအခမဲ့သုံးစွဲနိုင် (; Harlan Interfauna Ibérica, ဘာစီလိုနာ, စပိန် Harlan Teklad စံကြွက် Chow) နဲ့ထိန်းချုပ်ထားအပူချိန် (22 ±2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်စိုထိုင်းဆ (50 ± 10%), အတူ။ အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်၏အစမပြုမီ 12 နေ့ရက်ကာလအဘို့: တိရစ္ဆာန်များ (08 ဇ 00 မိ -20 ဇ 00 မိအပေါ်အလင်းအိမ်) တစ်ဦးစံ7ဇအလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျး 24 နိုဝင်ဘာလ 1986 (86 / 609 / EEC) ၏ဥရောပ Communities ကောင်စီညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အသုတေသန (REGA ES300305440012) အတွက်ဒေသခံကော်မတီများကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတက္ကသိုလ် Murcia ၏ bioethics ကော်မတီကို (RD 1201 / 2005) ကအတည်ပြုခြင်းနှင့် Ministerio က de Ciencia y ကTecnología (SAF / Federation 2009-07178), စပိန်ခဲ့သည်။
ကြွက်မြန်မာနိုင်ငံသ adrenalectomized ခဲ့ကြသည်နှင့် corticosterone တောင့် GC ၏အနိမ့်ပေမယ့်တည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ကိုသေချာစေရန်ထဲထညျ့ခဲ့သညျ ။ ကြွက်မြန်မာနိုင်ငံသ 90 အောက်မှာတစ်ဦး dorsal ချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့် (ADX) adrenalectomized ခဲ့ကြသည် / ကီလိုဂရမ် ketamine chlorhydrate mg နှင့် 8 / ကီလိုဂရမ် xylazin (ip) မေ့ဆေး mg နှင့်ခွဲစိတ်မှုမှာနှေးကွေး-လွှတ်ပေးရန် corticosterone လုံးလေးများနှင့်အတူအရေပြားအောက်ဆုံး (SC) ကိုထညျ့သှငျး။ Steroid တစ်မျိုးလုံးလေးများများ၏ဖွဲ့စည်းမှု (25 corticosterone ပေါင်း 75 မီလီဂရမ်လက်စထရော mg) implantation ပြီးနောက် 20 ဃအထိခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian nadir မှသက်ဆိုင်ရာတည်ငြိမ် corticosterone အာရုံစူးစိုက်မှုပေးရွေးချယ်ခဲ့သည် ။ corticosterone အစားထိုး (ADX ပေါင်း corticosterone) နဲ့ ADX ကြွက်များပလာစမာ corticosterone တစ်စိန်ခေါ်မှု-သွေးဆောင်တိုး mount ပါဘူး ။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် ADX ပေါင်း corticosterone ကြွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ adrenalectomy ၏ aldosterone ၏ဆုံးရှုံးမှုအလယ်တန်းလျော့ကျဆိုဒီယမ်အစားထိုး isotonic ဆား (0.9% NaCl) သောက်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက် adrenal extirpation မရှိဘဲတူညီသောခွဲစိတ်ကုသမှု (အတုအယောင်) အားအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အတုအယောင်နှင့် ADX ပေါင်း corticosterone ကြွက်ကတော့မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ5ဃများအတွက်ခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အောင်မြင်သောနှစ်နိုင်ငံ adrenalectomy corticosterone နှင့် ACTH ၏သွေးရည်ကြည်စူးစိုက်မှုအားဖြင့်၎င်း, ထို ADX တိရစ္ဆာန်များ၏ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာစာမေးပွဲကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ငါးရက်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်နှစ်ခု 75 အလင်းအီမေ့ဆေးအောက်တွင်မော်ဖင်းအကိုက်လုံးလေးများ mg နှင့်အတူ SC ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက် Lactose ကိုပါဝင်တဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာလုံးလေးများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးကတော့လုံးလေးများရဲ့ implantation နှင့် opioid ရန်၏စူးရှသောဆေးထိုးပြီးနောက်အပြည့်အဝရုပ်သိမ်း syndrome ရောဂါအပြီးနာရီအနည်းငယ်စတင်တသမတ်တည်း plasma မော်ဖင်းအကိုက်ပြင်းအားထုတ်လုပ်ပြသထားသည် ။ မော်ဖင်းအကိုက်အပေါ်မှီခိုလုံးလေးများ၏ implantation ပြီးနောက် 24 ဇအောင်မြင်နှင့် 15 နေ့ရက်ကာလအဘို့စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဆယ်ရက်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလုံးလေးများရဲ့ implantation ပြီးနောက်ကြွက်ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု (corticosterone နှင့် ACTH ၏သွေးရည်ကြည်စူးစိုက်မှု) အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလေးပါးကိုစမ်းသပ်အခြေအနေများ, FosB / ΔFosBစကားရပ်, CRH စကားရပ်, DYN စကားရပ်, TH စကားရပ်နှင့် FosB / ΔFosBစကားရပ် CRH- သို့ DYN- နှင့် TH-အပြုသဘောအာရုံခံခဲ့ကြသည်: (ဈ) အတုအယောင်-ရလဒ်များအရအိပ်ယာ; (ii) အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်; (iii) ADX-ရလဒ်များအရအိပ်ယာ; (ဃ) ADX-မော်ဖင်းအကိုက်။ အဆိုပါကြွက်များ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကရေရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုနိမ့်အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်အတွက်ကျဆင်းခြင်း induces ကြောင်းလူသိများသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်ဖင်းအကိုက်, အလုံးလေးများအနေဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ကြောင်းသေချာစေရန်ကုသမှုစဉ်အတွင်း check လုပ်ထားခဲ့သည် .
ဦးနှောက် Perfusion နှင့်ပုဒ်မ
ကြွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း pentobarbital တစ်ခုအလွန်အကျွံသုံးစွဲနှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည် (100 / ကီလိုဂရမ် ip mg) နှင့် paraformaldehyde (4 M က borate ကြားခံ, သော pH 0.1 အတွက် 9.5% paraformaldehyde) ပါဝင်တဲ့ fixative အားဖြင့်အောက်ပါဆားနှင့်အတူ transcardially perfused ။ အဆိုပါ perfused ဦးနှောက်၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်သူတို့3ဇတို့အတွက်တူညီသော fixative အတွက် post ကို fixed ခဲ့ကြသည်နှင့်အ Coronal အပိုင်း (4-μmအထူ) တစ်ခဲ microtome (Leica, Nussloch အပေါ် rostrocaudally ဖြတ်ခဲ့ကြသည်သည်အထိ 10% sucrose်PBS အတွက် 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား , ဂျာမနီ)။ Paxinos နှင့် Watson ၏ Atlas (2007)  ကြွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်: NAc (shell ကို), BNST, PVN, CeA နှင့် NTS-တစ်ဦးက2 (ပုံ 1) ။ အဆိုပါကဏ္ဍများကိုအသုံးပြုမှုသည်အထိ -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ cryoprotected နှင့်သိုလှောင်ထားခဲ့ကြသည်။
FosB / ΔFosBအပြုသဘောအရေးပါသည့် NAc (shell ကို) တွင်ရေတွက်ခဲ့ကြရသောဦးနှောက်ဧရိယာများ (စတုဂံ) ကိုညွှန်း Coronal အပိုင်းသိထားရေးဆွဲ, BNST, CeA, PVN နှင့် NTS .
FosB / ΔFosB Immunohistochemistry
Núñez et al အားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကဏ္ဍများ immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် ။ အတိုချုပ်, 0.3% H ကိုအတူပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးနောက်2O2 2; နှင့် 48% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည် (Sigma, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တစ်ရှူးကဏ္ဍများကိုအဓိကဆန့်ကျင် FosB / ΔFosB antiserum (ယုန် polyclonal, # SC-1, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA, USA တွင်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် 1000) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့မူလတန်းကျောင်း antibody ကို FosB နှင့်၎င်း၏တည်ငြိမ် splice မူကွဲΔFosBအကြားခွဲခြားမှုမထားဘူး။ FosB-inducing လှုံ့ဆော်မှုမှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့စူးရှ FosB induction desensitise ပြထားပြီး , , . ထို့ကြောင့်, မော်ဖင်းအကိုက်-pretreated နှင့် Non-pretreated ကြွက်များတွင် FosB / ΔFosBအစွန်းအထင်းများအကြားခြားနားချက်များအဓိကအားΔFosBစုဆောင်းခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ antigen သမားရိုးကျ avidin-ဓါတ်-immunoperoxidase protocol ကို (; Vector Laboratories, Burlingame,, CA, USA သို့ Vectastain ABC ရုပ်သံ Elite Kit) ကမြင်ခဲ့ကြသည်။ 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB; Sigma, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တုံ့ပြန်မှုနီကယ်-Ammonium ဆာလဖိတ်နှင့်အတူပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ကဏ္ဍများ, chrome-alum gelatine-coated ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် coverslipped ခဲ့ကြသည်။
FosB / ΔFosB-immunoreactive ခု၏နူက၏ double-တံဆိပ်ကပ် Immunohistochemistry နှင့် CRH-, TH- နှင့် DYN-အပြုသဘောအာရုံခံ
FosB / ΔFosB-TH အဘို့ကို double-တံဆိပ်ကပ်ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီကိုကုသအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်ထံမှတစ်သျှူးအပိုင်း DAB နီကယ်ပြင်းထန်မှုကို အသုံးပြု. FosB / ΔFosB immunoreactivity များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ TH သာ DAB chromogen သုံးပြီးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ FosB / ΔFosB immunostaining ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါ FosB / ΔFosBအစွန်းအထင်းပြီးနောက်ကဏ္ဍများ 2% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်နဲ့ကုသပြီးတော့ဆန့်ကျင် TH antibody ကို (AB152, Chemicon, အမေရိကန်နိုင်ငံယုန် polyclonal နှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး, PBS နှင့်ဆေးကြသည် ဟူ. ၎င်း, 1 အခန်းအပူချိန်မှာ 6000) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အတူတူ immunohistochemistry လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ TH antibody ကို-peroxidase ရှုပ်ထွေး DAB အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကဏ္ဍများမှာ chrome-alum gelatine coated ဆလိုက်များနှင့် coverslipped ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ FosB / ΔFosB-CRH နှင့် FosB / ΔFosB-လိုလားသူ DYN နှစ်ဆတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့, လုပ်ငန်းစဉ် FosB / ΔFosB-TH များအတွက်မတိုင်မီဖော်ပြထားသကဲ့သို့တူညီခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc အတွက် DYN-ဖော်ပြအာရုံခံဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်တစ်ဦးကိုပဲပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း citrate ကြားခံအတွက်ဦးနှောက်အပိုင်း incubating နေဖြင့်လျှောက်ထားခဲ့ပါသည် (10 MM citric အက်ဆစ်, 0.05% Tween 20, သော pH 6.0) 60 မှာပိတ်ဆို့ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ 20 မိဘို့ကို C °။ အဆိုပါမူလတန်း Anti-CRH ယုန် antiserum ကြင်နာစွာ Wylie ဒဗလျူခြိုငျ့ (အဆိုပါ Salk Institute က,, La Jolla, CA, USA) ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်နှင့် 1 မှာအသုံးပြုခဲ့သည် 500 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 72 ဇများအတွက်4dilution ။ အဆိုပါလိုလားသူ DYN မူလတန်း antibody ကို Neuromics (# GP10110, Neuromics, Edina, MN, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့်ရောလျက် 1 ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည် 2000 (72 ဇ,4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ။
ဗီဒီယိုကင်မရာ (DFC4000, Leica) နဲ့ချိတ်ဆက်; Images ကို Leica ဏု (Leica DM 290B) ၏နည်းလမ်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ FosB / ΔFosB-အပြုသဘောဆဲလ်အရေးပါကွန်ပျူတာ-ကူညီ image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ် (QWIN, Leica) ကို အသုံးပြု. ရေတွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NTS-တစ်ဦး၏နယ်နိမိတ်2, BNST, CeA, NAc (shell ကို) နှင့် PVN ၏ parvocellular subdivision ဖော်ပြထားခဲ့သည်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ပရိုဖိုင်း၏နံပါတ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးစီးပွားဆဲလ်အုပ်စုများ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း FosB / ΔFosBနျူကလီးယား profile များကိုအရေအတွက်အသီးအသီးကြွက်ကနေလေးငါးကဏ္ဍများကိုနှစ်နိုင်ငံရေတွက်စီကြွက်ဘို့တစ်ခုတည်းတန်ဖိုးကိုရရှိရန်ပျမ်းမျှခဲ့သည်။ လေ့လာသူဘက်လိုက်မှုမှရှောင်ရှားရန်, အားလုံးကဏ္ဍများကိုတစ်ဦးမကျြစိကှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများက quantified ခဲ့ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများများအတွက်စုစုပေါင်းအရေအတွက် SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
TH-, CRH- နှင့် DYN-အပြုသဘောဆဲလ်များနှင့် FosB / ΔFosBနှစ်ချက်အစွန်းအထင်း Profiles ၏အရေအတွက်
FosB / ΔFosB immunoreactivity များအတွက် positive အရေးပါအထက်တွင်ဖော်ပြထားတူညီတဲ့သမားရိုးကျအလင်း microscopy သုံးပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် x40 ချဲ့မှာရေတွက်ခဲ့သည်။ FosB / ΔFosB-အပြုသဘော CRH, TH သို့မဟုတ် DYN ဆဲလ် CRH-အပြုသဘောအဘို့အညို cytosolic သိုက်နှင့်အတူဆဲလ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်, TH-အပြုသဘောနှင့် FosB / ΔFosBများအတွက် DYN-အပြုသဘောအစွန်းအထင်းများနှင့်မှောင်မိုက် / အပြာနျူကလီးယားအစွန်းအထင်း။ တစ်ဦးကတစ်စတုရန်းလယ်ပြင် (195 μm) ကိုကိုးကားဧရိယာအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ဖမ်းမိ image ကိုအပေါ်သို့ superimposed ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသလေ့လာတွေ့ရှိကို double-label တပ်ထားသောအာရုံခံအရေအတွက် NTS TH အာရုံခံခြင်းနှင့် DYN အာရုံခံအဘို့အ NAc အဘို့, CRH အာရုံခံများအတွက် PVN, BNST နှင့် CeA အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်ကနေလေးငါးကဏ္ဍများအတွက်ရေတွက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးမြင်နိုင်နျူကလိယ (FosB / ΔFosB-အနုတ်လက္ခဏာ CRH, TH သို့မဟုတ် DYN ဆဲလ်) မပါဘဲ CRH, TH နှင့် DYN အပြုသဘောဆဲလ်တွေကိုလည်းဆန်းစစ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အသွေးသည် 5% EDTA င်ရေခဲ-အအေးပြွန်သို့စုဆောင်းခံခဲ့ရပြီးတော့ 500 (centrifuged ခဲ့သည် g; ကို C ° 4; 15 မိ) ။ corticosterone သို့မဟုတ် ACTH များအတွက် assayed သည်အထိ plasma, ကွဲကွာနှစ်ခု aliquots သို့ ခွဲ. -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ corticosterone နှင့် ACTH ၏ plasma အာရုံစူးစိုက်မှုကြွက်များအတွက်တိကျသော corticosterone နှင့် ACTH ပဋိသုံးပြီး quantified ခဲ့ကြသည် ([125ကျွန်မ] -CORT နှင့် [125ကျွန်မ] -ACTH က RIA; အမတ်ဇီဝဆေးပညာ, Orangeburg, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ။ အဆိုပါ assay ၏ sensitivity ကို ACTH များအတွက် corticosterone နှင့် 7.7 pg / mL များအတွက် 5.7 ng / mL ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်နှင့် GraphPad Prism ကိုစာရင်းအင်းအထုပ် (San Diego မှ,, CA, USA) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ဒေတာများကိုလွတ်လပ်သော variable တွေကိုအဖြစ်ကုသမှု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, မော်ဖင်းအကိုက်) နှင့်ခွဲစိတ်မှု (အတုအယောင်, ADX) နဲ့ကှဲလှဲ၏ Two-လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) ကသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Newman က-Keuls post ကို hoc တစ် ဦး ချင်းစီအုပ်စုတစ်စုနှိုင်းယှဉ်များအတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ap <0.05 နှင့်အတူခြားနားချက်များသိသာစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပလာစမာ ACTH (က) နှင့် corticosterone (ခ) ပြင်းအားအပေါ် adrenalectomy ၏ဆိုးကျိုးများ (ADX) ။ ပလာစမာ corticosterone အာရုံစူးစိုက်မှုမော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်များတွင်လျော့နည်းသွားသော်လည်းခွဲစိတ် ADX, placebo- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်များတွင်နှစ်ဦးစလုံး ACTH အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒေတာကို 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူ pretreated ကြွက်များတွင်ပလာစမာ ACTH နှင့် corticosterone အဆင့်ဆင့်၏ SEM ±ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ *** p<အတုအယောင်-ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် 0.001; ++p<0.01, +++p<အတုအယောင်-မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် 0.001 ။
ကျနော်တို့ corticosterone လုံးလေးများပြင်ဆင်မှုအဘို့အ Semmelweis တက္ကသိုလ် (ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ) မှဒေါက်တာMárton Vajna နဲ့ Anna ခေါက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအောက်ပါထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်: Ministerio က de Ciencia အီးImnovación (SAF / Federation 2009-07178 နှင့် SAF / Federation 2010-17907), စပိန်, အနီရောင်က de Trastornos Adictivos (RD06 / 0001 / 1006 နှင့် RD06 / 0001 / 1001), စပိန်, Fundación Seneca, Agencia ဒေသတွင်းက de Ciencia y ကTecnologíaဒေသက de Murcia (15405 / PI10), စပိန်။ DG-P ကိုပု Ministerio က de Ciencia အီးInnovación (AP2009-2379) မှမိဿဟာကထောက်ခံသည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1. Volkow ND, Skolnick P ကို ​​(2012) ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders များအတွက်နယူးဆေးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ. Neuropsychopharmacology 37: 290-292 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2. Robison AJ, Nestler EJ (2011) မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား. နတ်ဗြာ neuroscience 12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. ဟက် ER, Okun အီး, Mattson အမတ် (2009) အာရုံကြောစနစ်ပျက်စီးခြင်း, ယိုယွင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် microRNAs ၏ကုထုံးအလားအလာ. Neuromolecular Med 11: 153-161 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Li က MD, ဗန် der Vaart အေဒီ (2011) စွဲလမ်းအတွက် MicroRNAs: လိုက်လျောညီထွေအလယ်အလတ်? Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 16: 1159-1168 ။ [PubMed]
5. Mumberg: D, Lucibello FC အသင်း, Schuermann M က, Muller R ကို (1991) function ရန်ပရိုတိန်းကုဒ်သွင်း differential ထုတ်ဖော်ပြောဆို mRNAs အတွက် fosB မှတ်တမ်းရလဒ်ကအခြားရွေးချယ်စရာ splicing. မျိုးဗီဇ Dev မှ 5: 1212-1223 ။ [PubMed]
6. Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ (1997) နာတာရှည် Fos-Related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်ΔFosB၏တည်ငြိမ်သောမူကွဲ. J ကို neuroscience 17: 4933-4941 ။ [PubMed]
7. Moratalla R ကို, Elibol B, Vallejo M က, Graybiel လေး (1996) network-အဆင့်နာတာရှည်ကင်းကုသမှုနှင့် Withdrawal စဉ်အတွင်း Striatum အတွက်သွေးဆောင် Fos-ဇွန်ပရိုတိန်း၏ဖော်ပြမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ. အာရုံခံဆဲလျ 17: 147-156 ။ [PubMed]
8. Chao J ကို, Nestler EJ (2004) မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏မော်လီကျူး Neurobiology. ဆေးပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 55: 113-132 ။
9. JW, Nemeth CL, Robison AJ, Nestler EJ, Carlezon J ကို (2012) Muschamp အဆိုပါ Kappa-Opioid receptor Agonist U50488 ၏ Pro ကို-စိတ်ကျရောဂါအကျိုးသက်ရောက်မှုလျှော့ချနေချိန်မှာΔFosBကင်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်. ဟားဗတ် 71: 44-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Gago B, et al Suarez-Boomgaard: D, Fuxe K ကိုBrené S က, Reina-Sanchez MD ။ (2011) ကြွက် caudate putamen ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်ကူးယူအချက်စကားရပ်အပေါ်စူးရှနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု effect ။ D4 အဲဒီ receptor activation အားဖြင့်သိသိသာသာမော်ဂျူ. ဦးနှောက် Res 1407: 47-61 ။ [PubMed]
11 ။ Kaplan GB ကို, Leite-မောရစ် Ka, ဝါသနာရှင် WY, Young က AJ, Guy MD (2011) Opiate အသိမြှသွေးဆောင် Prefrontal cortical, Striatal နှင့် Amygdala ဦးနှောက်နေရာများအတွက် FosB / ΔFosB Expression. PLoS ONE 6: e23574 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Nye သူ, Nestler EJ (1996) နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနာတာရှည် fos-related antigen ၏ induction. Mol Pharmacol 49: 636-645 ။ [PubMed]
13 ။ McClung, CA, Nestler EJ, Zachary V ကို (2005) အဆိုပါ Locus Ceruleus နှင့် Ventral Tegmental ဧရိယာထဲမှာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် Withdrawal အားဖြင့် Gene ဖော်ပြမှု၏စည်းမျဉ်း. J ကို neuroscience 25: 6005-6015 ။ [PubMed]
14 ။ Núñezကို C, Martin F ကို, ခြံတစ်ဦးက, Laorden ML, Kovács KJ, et al ။ (2010) မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်-related အဆောက်အဦများအတွက် FosB / ΔFosB၏ induction. Neurochemistry ၏ဂျာနယ် 114: 475-487 ။ [PubMed]
15 ။ et al Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို။ (2004) နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုကြေး-Related ဦးနှောက် structures များအတွက်ΔFosB၏ induction. J ကို neuroscience 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
16 ။ Vialou V ကို, Robison AJ, LaPlant QC, Covington သူ, Dietz DM, et al ။ (2010) ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက်ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates. နတ် neuroscience 13: 745-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Ambroggi FC အသင်း, Turiault M က, Milet တစ်ဦးက, Deroche-Gamonet V ကို, Parnaudeau S က, et al ။ (2009) စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ: dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်. နတ် neuroscience 12: 247-249 ။ [PubMed]
18 ။ Sinha R ကို (2008) နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1141: 105-130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Koob gf, Volkow ND (2010) စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry. Neuropsychopharmacology 35: 217-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Koob, G, Kreek MJ (2007) စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုကြေး Pathways ၏ Dysregulation, နှင့်ဆေးဝါးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း. နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 164: 1149-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Koob gf, Le Moal က M (2008) စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ Neurobiological ယန္တရားများ. ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc B ကို 363: 3113-3123 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Koob gf (2006) စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology: ရောဂါများအတွက်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး neuroadaptational အမြင်. စှဲမွဲမှု 101: 23-30 ။ [PubMed]
23 ။ Carrasco GA, ဗန်က de အာကာ ld (2003) စိတ်ဖိစီးမှု Neuroendocrine ဆေးဝါးဗေဒ. ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ် 463: 235-272 ။ [PubMed]
24 ။ Piazza PV, Le Moal က M (1997) ဆုလာဘ်တစ်ခုဇီဝအလွှာအဖြစ် Glucocorticoids: ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological ဂယက်ရိုက်. ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ 25: 359-372 ။ [PubMed]
25 ။ Cleck ဖြစ်မှု, Blendy ဂျေအေ (2008) မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ: ပိုဆိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာ Making. J ကို Clin Invest 118: 454-461 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Goodman တစ်ဦးက (2008) စွဲလမ်း၏ Neurobiology ။ တစ်ခုကဘက်ပေါင်းစုံပြန်လည်သုံးသပ်. ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol 75: 266-322 ။ [PubMed]
27 ။ Dunn AJ, Swiergiel AH (2008) စိတ်ဖိစီးမှု-related တုံ့ပြန်မှု, ထိုသူနှစ်ယောက်စနစ်များအကြားအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးအတွက် corticotropin-releasing အချက်နှင့် noradrenaline ၏အခန်းကဏ္ဍကို. ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ် 583: 186-193 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Koob gf, Le Moal က M (2008) စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်က. အမ်းဗြာ Physiol 59: 29-53 ။
29 ။ Núñezကို C, ခြံတစ်ဦးက, et al Perez-Flores: D, Garcia-Borrón JC, Laorden ML ။ (2009) ဓာတ်လှေကား glucocorticoid အဆင့်ဆင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း tyrosine hydroxylase ၏ induction (TH) mRNA စကားရပ်, phosphorylation နှင့်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု (NTS-A2) ၏နျူကလိယထဲမှာအင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုတာဝန်ရှိသည်. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 150: 3118-3127 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Navarro-Zaragoza J၊ Hidalgo JM၊ Laorden ML, Milanés MV (2012) Glucocorticoid receptors များသည်ကြွက်များအား NTS noradrenergic လှုပ်ရှားမှု၏ opiate ဆုတ်ခွာခြင်း - လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မော်ဖင်းအနေဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Br J ကို Pharmacol Doi: 10.1111 / j.1476-5381.2012.01918.x ။
31 ။ Renthal W က, Nestler EJ (2008) မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ယန္တရားများ. မော်လီကျူးဆေးပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 14: 341-350 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ et al sim-Selley LJ, Cassidy အမတ်, Sparta တစ်ဦးက, Zachary V ကို, Nestler EJ ။ (2011) နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြအပေါ်ΔFosB overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. Neuropharmacology 61: 1470-1476 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, et al ။ (2006) မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBများအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ. နတ် neuroscience 9: 205-211 ။ [PubMed]
34 ။ Hyman SE, Malenka RC (2001) စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အဆိုပါမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ. နတ်ဗြာ neuroscience 2: 695-703 ။ [PubMed]
35 ။ Koob gf (2008) စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍ. အာရုံခံဆဲလျ 59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ et al Deroche-Gamonet V ကို, Sillaber ငါ Aouizerate B, Izawa R ကို, Jaber M က။ (2003) ကင်းအလွဲသုံးမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် Glucocorticoid receptor. J ကို neuroscience 23: 4785-4790 ။ [PubMed]
37 ။ Nestler EJ (2001) ရေရှည် plasticity နောက်ခံစွဲ၏မော်လီကျူးအခြေခံ. နတ်ဗြာ neuroscience 2: 119-128 ။ [PubMed]
38 ။ Laorden ML, Ferenczi S က, et al Pintér-Kübler B က, ဇာလ-Martin ll, Lasheras MC ။ (2012) Hypothalamic Orexin-တစ်ဦးကအာရုံခံမော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အဆိုပါဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏တုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေ. PLoS ONE 7: e36871 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Navarro-Zaragoza J ကို, Núñezကို C, Ruiz-မက်ဒီနာ J ကို, Laorden ML, Valverde အို et al ။ (2011) CRF (2) ကို hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့်ကြွက်များအတွင်းမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်အတွက်တိုးမြှင့် noradrenergic လှုပ်ရှားမှု mediates. br J ကို Pharmacol 162: 851-862 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို et al ။ (2004) DFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch ကို. မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန 132: 146-154 ။ [PubMed]
41 ။ Nestler EJ (2008) စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ. ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc B ကို 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Crespo ဂျာ Manzanares J ကို, Oliva JM, Corchero J ကို, Garcia က-Lecumberri ကို C, et al ။ (2003) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းသည့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအချက်မျိုးဗီဇစကားရပ်လွှတ် corticotropin မြားတှငျပွောငျးလဲထုတ်လုပ်. မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန 117: 160-167 ။ [PubMed]
43 ။ ဗိုလ်မှူး M က, Turchan J ကို, Smialowska M က, Przewlocka B က (2003) amygdala ၏ကြွက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက် CRF biosynthesis အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု. Neuropeptides 37: 105-110 ။ [PubMed]
44 ။ Núñezကို C, ခြံတစ်ဦးက, Laorden ML, Milan သင်္ဘော MV, Kovács KJ (2007) မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု-related hypothalamic neuropeptide ဗီဇထုတ်ဖော် activation. J ကို Neurochem 101: 1060-1071 ။ [PubMed]
45 ။ Swanson LW, Simmons DM (1989) အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ CRH ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ peptide mRNA အဆင့်ဆင့်အပေါ် differential Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းနှင့်အာရုံကြောလွှမ်းမိုးမှု: ကြွက်တစ် Hybrid histochemical လေ့လာမှု. J ကို comp Neurol 285: 413-435 ။ [PubMed]
46 ။ Makino S က, ရွှေ PW, Schulkin J ကို (1994) CRH mRNA နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာအကြောင်းအရာအပေါ် corticosterone ၏ဆိုးကျိုးများ, အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲတွင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်. ဦးနှောက် Res 657: 141-149 ။ [PubMed]
47 ။ Makino S က, ရွှေ PW, Schulkin J ကို (1994) အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်း mRNA နှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular ဒေသအပေါ် Corticosterone ဆိုးကျိုးများ. ဦးနှောက် Res 640: 105-112 ။ [PubMed]
48 ။ Viau V ကို, Soriano L ကို, Dallman MF (2001) အန်ဒရိုဂျင်ပြောင်းလဲ Corticotropin အဆိုပါ Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်ထိန်းညှိဖို့ Known Forebrain ဆိုဒ်များအတွင်းမှာပဲဟော်မုန်းနှင့်မိုင်နိုအက်စစ် Vasopressin mRNA ဖြင့်ထုတ်လွှ. Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ် 13: 442-452 ။ [PubMed]
49 ။ Palkovits M က, Young က WS, Kovács K ကိုTóth Z ကို, Makara GB ကို (1998) corticotropin-releasing ဟော်မုန်းမျိုးဗီဇရေရှည် paraventricular ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါဗဟို amygdaloid အာရုံခံ၏စကားရပ်နှင့် adrenalectomy အတွက် ALTER. neuroscience 85: 135-147 ။ [PubMed]
50 ။ Smith က RJ, Aston-ဂျုံးစ်, G (2008) အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက် Noradrenergic ဂီယာ: အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေး abstinence စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့် relapse အတွက်အခန်းကဏ္ဍ. ဦးနှောက် Struct Funct 213: 43-61 ။ [PubMed]
51 ။ Sabban EL, Hiremagalur B, Nankova B, Kvetnanský R ကို (1995) catecholamines biosynthetic အင်ဇိုင်းတွေ၏စိတ်ဖိစီးမှု-ရူးနှမ်းသော induction ၏မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 771: 327-338 ။ [PubMed]
52 ။ Roozendaal B, Okuda က S, က de Quervain DJF, McGaugh JL (2006) Glucocorticoids ကွဲပြားခြားနားသောမှတ်ဥာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလွှမ်းမိုးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သွေးဆောင် noradrenergic activation နှင့်အတူအပြန်အလှန်. neuroscience 138: 901-910 ။ [PubMed]
53 ။ Rani CSS ကို, Elango N ကို, ဝမ်အက်စ်အက်စ်, Kobayashi K ကိုခိုင်ခံ့ R ကို (2009) အဆိုပါ Rat tyrosine Hydroxylase Gene အတွက် Glucocorticoid တုံ့ပြန်မှု Element ကိုအဖြစ်တက်ကြွစွာပရိုတိန်း-1-လိုပဲအဆက်မပြတ်၏ identification. Mol Pharmacol 75: 589-598 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Hughes P ကို, Dragunow M (1995) ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ induction နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်း neurotransmitter-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်များ၏ထိန်းချုပ်မှု. Pharmacol ဗြာ 47: 133-178 ။ [PubMed]
55 ။ Kovacs GL, Telegdy, G (1988) Hypothalamo-neurohypophyseal neuropeptides နှင့်စမ်းသပ်ဆဲမူးယစ်ဆေးစွဲ. ဦးနှောက် Res Bull 20: 893-895 ။ [PubMed]
56 ။ Kovács KJ, ခြံတစ်ဦးက, Sawchenko PE (2000) Glucocorticoid အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ရွေးချယ် parvocellular neurosecretory အာရုံခံအတွက် vasopressin ကူးယူပစ်မှတ်ထား. J ကို neuroscience 20: 3843-3852 ။ [PubMed]
57 ။ Frenois က F, Cador M က, Caille S က, Stinus L ကို, Le Moines ကို C (2002) naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့် somatic အစိတ်အပိုင်းများအာရုံကြောဆက်စပ်. EUR J ကို neuroscience 16: 1377-1389 ။ [PubMed]
58 ။ ရွှေ LH, Stinus L ကို, Inturrisi အီး, Koob gf (1994) ကြွက်များတွင်အရေပြားအောက်ဆုံးမော်ဖင်းအကိုက်လုံးလေးများ implantation အောက်ပါအချိန်ကြာမြင့်စွာသည်းခံစိတ်, မှီခိုနှင့် abstinence. EUR J ကို Pharmacol 253: 45-51 ။ [PubMed]
59 ။ Paxinos G. အများနှင့် Watson ကို C (2007) stereotaxic သြဒီနိတ်၌ကြွက်ဦးနှောက်။ အမ်စတာဒမ်: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
60 ။ et al Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ။ (2008) အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ FosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ. synapses 62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]